Shariif: ” Diinta iyo dowladda ha la kala saaro”“Non ho rinnegato la fede, ho solo compreso la necessità di separare religione e governo.) ” Diinta maan beenin, waxaanse ogaaday in loo baahan yahay in diinta iyo dowladda la kala saaro. | News From Somalia
+Shariif Sheekh Axmed ayaa waraysi siiyay wargeyska Il Giornale oo ka soo baxa dalka Talyaaniga.
Dad badan waxay la tahay in Shariif weli rumaysan yahay in diinta Islaamku ay tahay sharciga ugu sarreeya Koonka noqotana kan loo xukun tago Somaliduna maanta u baahan tahay.
Shariif waxa uu gabi ahaanba badaley mowqifkiisii ku aadanaa in diinta islaamka ay ku lug yeelato maamulka iyo maareynta Dalka Soomaaliya waxa uu wareysi uu siiyey wargeyska Il Giornale ee kasoo baxa dalka Talyaaniga uu ku sheegay in ururkii maxkamadaha uu dalka burburinayay iyo in uu hadda aamminsan yahay in diinta iyo siyaasadda la kala saaro!!
“Non ho rinnegato la fede, ho solo compreso la necessità di separare religione e governo.) ” Diinta maan beenin, waxaanse ogaaday in loo baahan yahay in diinta iyo dowladda la kala saaro.
iyaasadda ah sameeyay.